Muxuu Jurgen Klopp Ka Yidhi Labadii Qalad Ee Van Dijk & Alisson Ee Guul-darrada U Horseeday Liverpool Ciyaartii Arsenal? - Gool24.Net
Muxuu Jurgen Klopp Ka Yidhi Labadii Qalad Ee Van Dijk & Alisson Ee Guul-darrada U Horseeday Liverpool Ciyaartii Arsenal?
Tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ka hadlay guul-darradii kooxdiisa kasoo gaadhay kulankii ay xalay martida ugu ahaayeen Arsenal ee labada qalad ee waaweyn ay sameeyeen ciyaartoydiisu, taas oo sababtay inay ka quustaan rikoodhkii dhicaha Premier League ee Manchester City ay dhigtay.
Virgil van Dijk iyo Alisson ayaa sameeyey laba qalad oo dilaa ah oo sabab u noqday in laba gool laga dhaliyo, Liverpool oo hal gool la hormartayna lagu garaaco 2-1, waxaana la arkayay tababare Jurgen Klopp oo amakaag darteed afka kala waaxay, wax uu sameeyana garan la’.
Liverpool ayaa la hormartay gool uu u daliyey Sadio Mane, laakiin daqiiqaddii 32aad ayuu Van Dijk dhayalsi darteed u lumiyey kubbad uu goolkiisa horteeda ku haystay, waxaana gool u beddelay Alexandre Lacazette, waxaana ciyaarta oo 1-1 ah qalad kale sameeyey goolhaye Alisson oo kubbad si toos ah ugu dhiibay ciyaartoyda Arsenal, waxaana qaladkiisa ku ciqaabay Reiss Nelson oo goolka labaad ka dhaliyey.
Klopp oo ciyaarta kaddib hadlay ayaa ku dooday in qaladaadkani ay ka caawin doonaan Liverpool inay si fiican u ciyaarto xili ciyaareedka dambe, waxaanu yidhi: “Laba jeer, waa habayacnimo weyn, iyadoo aanu ciyaartana 1-0 ku hoggaaminaynay, gaar ahaan qaybtii hore oo aanu gool dhalinay aadna aanu u wanaagsanayn. 24 jeer ayaanu goolka tooganay, iyaguna saddex jeer, waa wax cajiib ah, laakiin waxa jiray laba qalad oo ciyaarta nagu dilay.
“Arsenal fursado dhab ah may helin, toogasho kale ayaa jirtay ilbidhiqsigii ugu dambeeyey, kubadda cagtana kuma guuleysan kartid marka lagaa dhalinayo goolal noocan ah.
“Waxaanu galnay nasasho, way iska caddahay, waxaanu luminay feejignaantii, tartankuna waa horyaalka Premier League oo sidaas ma samayn kartid. Virgil van Dijk ayaa kubadda lumiyey, laakiin maan arkayn wax badan oo aan ka idhaahdo. Cidina may doonayn kubadda, wax macno ahna ma samaynayso.”
Intaas kaddib ayuu Klopp sharraxay sababta guul-darradan iyo qaladaadka ay Alisson iyo Van Dijk sameeyeen u caawinayaan kooxdiisa, waxaanu yidhi: “Waaa inaanu wax ka barano boqolkiba boqol, waananu ka baranaynaa. Waxaan hubaa in aanaan xili ciyaareedka oo dhan sidan oo kale samayn, waxaanu ku jirnay waqti hoose, mar, laba, laga yaabaa in mid saddexaadna jiray, laakiin caawa (xalay) waa la nagu ciqaabay. Waxay noogu wanaagsanayd hal dhinac, waana inaanu wax ka barano.”
Liverpool waxay rajaynaysay inay jabiso rikoodhkii 100ka dhibcood ee Manchester City, laakiin hadda waxa kaliya oo ay gaadhi karaan 99 haddii ay badiyaan labada kulan ee u hadhay.